अमेरिकामा नेपाली समुदाय र पत्रकारबीच अन्तर्क्रिया: मन माझामाझपछि साथसाथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता – Everest Times News
न्युयोर्कमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरू छन् । हरेक सामुदायिक संस्थाहरूको फरक उद्देश्यले खोलिए पनि हरेकले नेपाल र नेपालीको लागि सहयोग गरिरहेका छन् । तिनै सामुदायिक संस्थाहरूसँग नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ(नेजा)ले विगत लामो समयदेखि हातेमालो गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
अमेरिकामा रहेका पत्रकारहरुको एकमात्र साझा यो संस्थाले समुदायको हरेक गतिविधिमा प्रतिनिधित्व जनाउनुका साथै बेलाबेला सहयोग पनि गर्दै आएको छ । नेजाले यस पटक तिनै समुदाय र संस्थाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्‍यो । न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटस्थित जुइस सेन्टरमा भएको सामुदायिक अन्तर्क्रियामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्कका महावाणिज्य दूत कृष्ण क्षेत्री प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए । न्युयोर्कका क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको साथै न्युयोर्क, पेन्सलभानिया, भर्जिनिया, बाल्टीमोर, वासिङटन डिसी, टेक्सस, क्यालिफोर्निया र लस एन्जलसमा क्रियाशील पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । नेजाका अध्यक्ष सुदिप पन्तको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष मच्छे गुरुङले सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए । त्यस्तै नेजाका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्थाको रूपमा स्थापित नेजाले अहिलेसम्म समुदायमा गर्दै आएको गतिविधिको साथै अबको दिनमा समुदायसँग नेजाले कस्तो कार्य गर्ने र समुदायले के अपेक्षा गरिहरेको छ भन्ने मन्तव्य राखेर अन्तर्क्रिया सुरु गरेका थिए । नेजाको महासचिव किरण मरहट्ठाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहयोग गर्नेहरुलाई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कल्पना घिमिरेले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।
प्रश्न : अबको पत्रकारिता कस्तो होस् ?
कार्यक्रमको शुरुमा नेजाकी कोषाध्यक्ष मच्छे गुरुङले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उपस्थितलाई स्वागत गरेकी थिइन् । सञ्चारमाध्यम र समूदायको सम्बन्धलाई कसरी सुधारेर लाने र नेपाली मिडियालाई कसरी समेटेर काम गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेजाका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार आङछिरिङ शेर्पाले ‘फ्लोर ओपन’ गरे । नेजा र समाजको सम्बन्धबारे प्रकाश पार्दै शेर्पाले भने, ‘ नेजाले नेपाली समूदायसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेकालाई सहयोगका लागि विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । अबका दिनमा हामीले तपाइहरुको सहयोगसँगै कसरी अघि बढ्ने भन्ने मुल प्रश्न हो । यहाँको पत्रकारिता कस्तो होस भन्ने चाहनुहुन्छ ? यसैबारेमा तपाइहरुको सुझाव लिन नै यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’
पत्रकारिता सेलाएको देखियो, विरोधका लागि विरोध नहोस
त्यसपछि उपस्थित समूदायका व्यक्तित्वहरुले नेजालाई सुझाव पेश गरे । गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका महासचिव बिआर लामाले पछिल्लोपटक अमेरिकामा नेपाली पत्रकारिता सेलाएको गुनासो गरे । पत्रकारिता सक्रिय रहेमा सुध्रिने अवसर हुने उल्लेख गर्दै उनले एनआरएनको बारेमा नेपाली मिडियाले समाचार नलेखेको गुनासो गरेका थिए । ‘राम्रो गरिएका कुराहरु मात्र होइन गलत भएका कुरा गलत भयो भनेर लेख्नु पर्ने तर विरोधका लागि विरोध नहोस । डिसेम्बरमा मिडिया कभरेज नै भएन,’ महासचिव लामाले भने ।
त्यस्तै जनजाति महासंघ अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लुइसङ वाइबाले पत्रकारहरु सधै निष्पक्ष हुनुपर्ने र समाचारहरु सधै भेरिफाइ गरेरमात्र लेख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका अध्यक्ष लक्यान लामाले स्थानीय मिडियाले आफ्नो एजेन्डा तय गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘पत्रकारिता देशको चौथो अंग हो । तर व्यवहारमा त्यो देखिएन । मिडियामा घटना र परिघटनाहरु सम्पादकीय मार्फत आउनुपर्छ,’ लामाले भने ।
बासी समाचार किन छाप्नु ?
त्यस्तै जनसम्पर्क समितिका पूर्व संयोजक विष्णु सुवेदीले मिडिया चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए । भने, ‘मिडिया चनाखो होस । बायस न्युजहरु धेरै आएका छन् ।’ एनआरएनमा जन सम्पर्क समितिको राजनीति भयो भनेर लागीरहेको आरोपको सम्बन्धमा उनले प्रजातन्त्रिक विचार बोक्नेहरु बढी भएकोले कसैले पनि रोक्न नसकिने तर्क गरे ।
नेजाको हालै मनोनित कानुनी सल्लाहकार बासु फुलाराले कतिपय अवस्थमा पत्रकारले सत्यतथ्य नबुझी लेख्ने गरेको उल्लेख गर्दै बासी समाचार नछाप्न आग्रह गरे । उनले भोज खाने कार्यक्रममा जानका लागि मात्र पत्रकारिता नगर्न सुझावसमेत दिए । भने, ‘पत्रकारले फयाक्ट नबुझी लेख्छन् । सोसल मिडियामा हामीले पोस्ट गरेका चिजहरु तीन दिनपछि नलेख्नुस् । हामी फर्वार्ड पत्रकार हौ । प्रोफेसनल हुन चाहनुहुन्छ भने पुराना कुरालाई नलेख्नुस ।’
अब अ‌ंग्रेजी माध्यममा जानुपर्‍यो र टेलिभिजनमा सञ्चालन गरौ
त्यस्तै वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षेत्रीले प्रवासमा धेरै जसो पत्रकारहरुले सकी नसकी समुदायकै हितमा सेवा गरिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरुले गरेको राम्रो कार्यको प्रशंसा गरे । भने, ‘भन्न सजिलो छ, यहाँ आफ्ना काम छोडी सकीनसकी पत्रकारहरुले समुदायलाई सेवा गरेको पनि बिर्सन हुदैन,’ एनआरएन आइसिसिको नागरिकता निरन्तरता समितिको समेत सहसंयोजक क्षेत्रीले मिडियाकै कारणले समुदाय अघि बढेको उल्लेख गदै कतिपय अवस्थामा पीत पत्रकारिताका गुनासो आइरहेको सम्बन्धमा कसैले गल्ती गरेपनि उसले सुधार्दै लान सुझाव दिनु पर्ने बताए । क्षेत्रीले नेपालीले अब अंग्रेजी माध्यमको मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्ने र टेलिभिजन सञ्चालनतिर ध्यान दिनसमेत प्रोत्साहन गरे । भने, ‘येल्लो जर्नालिजम भयो भन्ने कुरा जहिले पनि हुन्छ । सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज सानो छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने यसमा हामी लाग्नुपर्छ ।’
डा तारा निरौलाले पत्रकारिता अब व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत हुनुपर्ने सुझाव दिए । निरौलाले भने, ‘साथीहरुको प्रवासमा गरेको कामको सधै कदर गर्नै पर्छ । अहिलेसम्मको प्रिन्ट अनलाइन व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा चलेको छ । मुख्य व्यक्तिले छाड्ने हो भने कोल्याप्स् हुने अवस्था भएकोले अब व्यवसायिक मात्र हैन संस्थागत हुनुपर्‍यो पत्रकारिता ।’
नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका आनन्द विष्टले पत्रकारिता गरिरहेकाहरुको प्रशंसा गर्दै भने, ‘धेरै दुख गर्नुभयो । मिडिया चलाएर जीवन चलाउन गाह्रो छ । तैपनि तपाइहरुको काम प्रशंसानीय छ ।’
टिपिएसबारे मिडियाले वास्तै गरेन
अधिकारकी प्रतिनिधि नर्बदा क्षेत्रीले पछिल्लो समय टिपिएस सबैले कोसिस गरेमा पाउने सकिने भएकोले यस्ता विषयहरुमा मिडियाको ध्यान नगएको र इमेल पठाउँदा पनि वास्ता नगरेको गुनासो गरेकी थिइन् । त्यस्तै एनआरएन न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष रामहरि अधिकारीले विगतमा एनआरएनको समाचारहरु मिडियामा खासै प्रकाशनमा नआएको भए पनि अहिल राम्रोसँग महत्व दिएर प्रकाशन गरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गदै धन्यवाद दिए । एनआरएन आइसिसिका सदस्य बन्दना कोइरालाले तलबभत्ता खाएर सामाजिक सेवा गरिरहेको छु भन्दै मिडियामा आफनो समाचार आएन भनेर गुनासो गर्नु नहुने धारणा राखिन् ।
उनले समुदायमा पत्रकारिता गरिरहेकोले कमाउन नपाउने भएकाले समुदायले पनि पैसा कमाउने पत्रकार र नकमाउने पत्रकार चिन्नु पर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समुदायमा पनि तलब खाएर समाजसेवा गरिरहेको र स्वयं सेवकको रुपमा समाज सेवा गरिरहेकोलाई चिन्नुपर्ने बताइन् । कोइरालाले भनिन्, ‘यदि कसैले तलब खाएर समाजिक सेवा गरिरहेको छु भन्ने तर समाजमा केही पनि योगदान छैन भने त्यसलाई समुदायले बुझनु पर्छ । त्यस्ताले मिडियालाई गाली गर्न हुदैन ।’
जन सम्पर्क समितिका सदस्य प्रमोद सिटौलाले पत्रकारहरुले अरुलाई पनि सम्मान गर्नु पर्ने र आधुनिक दास र आधिकारिक दासको वीचमा फरक हुनुपर्ने बताएका थिए । एनआरएनका बोर्ड अफ डाइरेक्टर सञ्जय थापाले भने, ‘पत्रकारले लेखेको बारेमा हामी गाली गर्छाै तर हामीले गरेको कमीकमजोरी र गल्तीको बारेमा कसले गाली गर्ने ?’ पत्रकारले पनि समाजमा राम्रो सामाजिक काम गर्नेहरुको बारेमा गलत लेख्न नहुने र जहिले पनि सकारात्मक सोचले पत्रकारिता गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । सामाजिक कार्यकर्ताहरु नै हुन समाजलाई अघि बढाउने भएकोले पत्रकारहले सकारात्मक रुपमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकारकर्मी सिर्जना काफ्लेले प्रवासमा पत्रकारिता पेशालाई निरन्तरता दिनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा भएको बताईन् । ‘अमेरिकामा कतिपय पत्रकारहरु दिनभर आफ्नो काम गरेर फर्कन्छन बेलुकी ल्यापटप खोलेर समाचार लेखेर हाम्रो समुदायलाई सहयोग गरेको देख्दा मन छोयो,’ काफ्लेले भनिन् ।
समाजिक सञ्जालमा गरिने पत्रकारिता र मास मिडिया फरक
नेजाका निवर्तमान महासचिव तथा पत्रकार तोया दाहालले हामी वीचमा चाकरी, सिजनल पत्रकारिता, सीमित समय स्तुतिगान गाएर हराउने पत्रकारहरु पनि भएकोले त्यस्तोलाई चिन्नु पर्ने बताए । तर आधारभुत अभ्यास गरेर बेग्लै चिनारी बनाएको पत्रकारहरु कहिले पनि नझुक्ने र नहराउने उनीहरुले एउटा तहमा पक्कै पुर्‍याउने उनको भनाई थियो । दाहालले थपे, ‘हामी प्रवासमा स्वयंसेवकको पत्रकारिता गरिरहेका छौ । तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने पत्रकारिता र मास मिडियामा गरिरहेका पत्रकारिता विल्कुलै फरक छ ।’
सञ्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठले आफूले पनि गाली गर्दै पत्रकारितामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए । श्रेष्ठले भने, ‘म आफु पनि सुध्रिने र सिक्ने क्रममा छु । म पत्रकार हुँदै होइन आवश्याकताले हिजोको अधिकारकर्मीलाई अघि बढाउँदै गाली गर्दै लेख्दै सँच्चिदै समुदायसँगै अघि बढेको हो । समुदायमा विगतको तिक्तता र गल्तीहरुलाई सुधार्दै अघि बढ्नु पर्छ । प्रवासमा विशेष गरी एनआरएनमा सुध्रिनु र सच्चिनु पर्छ ।’
पत्रकार अनिल अधिकारीले समुदायमा को पत्रकार हो होइन भन्ने चिन्नु पर्ने बताए । ‘फेसबुकमा पोस्ट गरेको भरमा पत्रकार भन्नु हुदैन । जसले पत्रिकामा एक पेज लेख्न सक्दैन त्यस्तालाई पत्रकार भन्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘पत्रकार निम्तो नभएसम्म कही पनि जाँदैन । तर खोजीको विषय भए जसको घरमा पनि पुग्छ ।’ प्रवासमा सयभन्दा बढी संघसंस्थाहरु भए पनि मिडिया टिकाउन सहयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकार र सञ्चारकर्मी वीचको फरक समुदायले बुझ्नुपर्ने बताए ।
नेजाको संस्थापक अध्यक्ष गिरिश पोखरेलले समुदायले अब दोस्रो पुस्ताप्रति चासो दिन नसके नेपालीत्व र नेपाली समाज नै छिन्न भिन्न हुने भएकोले बेलैमा सोच्नु पर्ने बताए । समुदायले आफ्नो लक्ष्यसँगै अबको दिनमा आगामी पुस्तालाई ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेजाका पूर्व अध्यक्ष गौतम दाहालले एनआरएनले संस्थागत रुपमा अघि बढ्न नेजासँग समन्यव गरी संस्थागत रुपमा मिडिया कोर्डिनेटर चयनलगायतका धेरै कार्यहरु गर्न सकिने भएकोले मिलेर काम गर्न सुझाए ।
नेजाका पूर्व सदस्य अनुज थापाले केही संस्थाबाहेक अहिलेसम्म मुलधारको पत्रकार कसैले पनि चिन्न नसकेको गुनासो गरे । उनको प्रश्न थियो, ‘पछिल्लो समय अमेरिकामा नेपालीहरुले लाइन्स क्लबहरु किन खोलेको होला । थाह पाउन सकिनँ । नेजाले अबको दिनमा मुलधारको पत्रकारिता गर्ने र अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृति कोष स्थापना गर्न आग्रह गर्छु ।’
समुदायले पत्रकारलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्न भएन
वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रले अमेरिकामा आएपछि पत्रकारिता नशा हो की पेशा हो अन्यौलमा परेको बताए । भने, ‘हामी आफ्नो मानो खाएर समुदायको लागि पत्रकारिता गरिरहेका छौ । तपाई सामाजिक अभियन्ताहरुले समुदायमा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुलाई धन्यवाद भन्न सक्नु पर्छ । हामीसँग जति कमजोरी छ तपाईहरुसँग पनि उतिकै कमजोरी छन् ।’ पत्रकार र समूदायका मानिस एकै किसिमका भएकाले सबैको गल्ती हुनेसमेत उनको भनाई थियो । मिश्रले भने, ‘तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्छ नेपाली संस्थाहरु ८ सय वटा छ रे, के गर्दै छ ? यहाँ धेरै जसो फुटिरहेको छ । पत्रकार पनि कुनै ग्रहबाट आएको बेग्लै मान्छे होइन । हामीले समुदायको नेतृत्व गर्दै गर्दा विश्वसनीय कार्य गरेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ । नेजा अब सशक्त रुपमा अघि बढ्ने छ । हामी अब आउने पुस्तालाई तयार पारेर अघि बढाउने छौ । हामीले समुदायमा नेपालमा गदै आएको नशाकै कारण यहा पत्रकारिता गरिरहेका हौ । कहिलेकाही तपाईहरु समुदायलले नै गलत लेखाउनु हुन्छ एकले अर्काले विगार्न लेख्न दिनु हुन्छ ।’
यता पश्चिम क्षेत्रको अवैतानिक वाणिज्यदूत ऋषि ढकालले नियोगसँग नजिक भएर काम गर्न पत्रकारहरुलाई सुझाव दिए । भने, ‘यहाँ कति कुरा देखाउन हामीले सकिरहेका छैनौ । पत्रकार साथीहरुले नियोगसँग नजिक भएर काम गरिदिनुपर्छ ।’
ढकालले समुदायमा एकले अर्काबीच सुन्ने र सुनाउने जुन यो कार्यक्रमले सबैलाई फाइदा पुगेको बताए । पत्रकारहरुले समुदायमा गदै आएको काममा औला उठाउने काम गर्नु हुदैन । ‘पत्रकारको मापदण्डभित्र राखेर नेजालाई बलिलो संस्था बनाउनु पर्छ । ड्युटी फ्रिबाट आएको सामानको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी नभएर हो वा थाहा भएर पनि प्रचार नगरेको हो आश्चार्यमा परेको छु,’ उनको जिज्ञासा थियो ।
नेपाल सरकार, समुदाय र नेजाको टिमबीच पहिलो अन्तर्क्रिया
नेपाली कन्सुलेटको महावाणिज्यदूत कृष्ण क्षेत्रीले सरकार, समूदाय र पत्रकारबीच पहिलोपटक अन्तर्क्रिया भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेजा टिमलाई धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार, समुदाय र नेजाको टिमबीच यस्तो कार्यक्रमले हामीलाई अघि बढ्नमा धेरै फाइदा पुग्ने छ । हामीहरु माझ केही कमीकमजोरीहरु पक्कै पनि छन् यसले हामीहरुबीच मन माझिएको छ ।’
महावाणिज्यदुत क्षेत्रीले नेपाली समुदायलाई समृद्धि बनाउने भनेकै समुदाय र मिडियाको मिलाप भएको बताए । कतिपय समाचारहरु पुष्टि नभइकन छापिँदा समाजमा नकारत्मक असर पुगेकोले यस्तो गलत कार्यतर्फ नेजा र सम्बन्धित पत्रकारहरुले पनि ध्यान दिनु पर्ने छ,’ क्षेत्रीको सुझाव थियो ।
नेजाका अध्यक्ष सुदिप पन्तले प्रवासमा हामी नेपाली एक भएर नेपाली माटोलाई सहयोग गर्ने मन भएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमको बिट मारेका थिए । भने, ‘हामीले यहा पूर्णाकालीन रुपमा पत्रकारिता गर्न नसक ेपनि समुदायको लागि सहयोग पत्रकारिता गरिरहेकोले समुदायले बुझनु पर्छ । हामीले तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौ । पत्रकार साथीहरुले पनि समाचार लेख्दा नकारात्मक सोच नलिइ निस्वार्थ भावनाले काम गर्दा पनि समस्यामा परेको अवस्थामा नेजाले साथ दिने छ । प्रवासमा समुदायको हितमा पत्रकारिता गर्दा गर्दै तपाई पत्रकार मित्रहरुलाई कसैले धम्क्याएमा हामी त्यसको विरुद्धमा लाग्ने छौ । कसैलाई समस्या परे हामी कानुनी उपचार दिलाउन अघि बढ्ने छौ ।’